"Mentre guardavo il film di Padre Pio chiesi la grazia al Frate" la signora Rita riceve il miracolo | Ilblogdellapreghiera
"Mgbe m na-ekiri ihe onyonyo nke Padre Pio, Ajụrụ m Friar maka amara" Oriakụ Rita natara ọrụ ebube ahụ
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 12, 2020 Maggio 12, 2020
Ndị dọkịta chọpụtara Rita nwere nnukwu nsogbu obi. Ebe nchekwa obi ya anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọrịa ahụ mere ka ọ kwaga naanị ma ọ bụrụ onye ọzọ esoro ya.
"Aha m bụ Rita Coppotelli ma rue mgbe 2002 M weere onwe m dị ka onye ekweghị na Chineke na onye ekweghị ekwe" Nke a malitere akụkọ ọgwụgwọ Oriakụ Rita. Ndị dọkịta achọpụtala ya na o nwere ọrịa obi o mere nke na-eme ka mmadụ soro ya na njem ọ bụla.
Oriakụ Rita nwere nwanne nwanyị, Flora, onye kwere ekwe nke ukwuu na onye otu ndị otu ekpere raara nye Saint nke Pietrelcina. Flora akwụsịbeghị ịrịọ Chineke maka ntụgharị nke Rita, nke mere na ya onwe ya ga-aza arịrịọ ya maka olile anya na nzọpụta nye Onye-nwe, ikekwe n'ụzọ ziri ezi site na ịrịọ arịrịọ Padre Pio.
Padre Pio: ọrụ ebube
N'otu mgbede, anyị nọ ọdụ na sofa, nwanne m nwanyị chọrọ ịhụ ihe nkiri banyere Padre Pio, nke ha ka mepụtara. Ka anyị na-elele ya, ahụrụ m ebe Padre Pio gwọtara otu nwa nwoke kpuru ìsì, na-enweghị ụmụ akwụkwọ, echekwara m: Padre Pio, mana olee otu ị ga - esi nyere onye ọ bụla na mụ aka? Mgbe ahụ echetakwara otu ezigbo enyi m, nne nke nne atọ, na-arịa ọnya, o wee mee m ihere maka echiche ahụ. Ya mere, akwụrụ m ọtọ n'elu ihe ndina ya mgbe ihe nkiri ahụ na-aga n'ihu. "
Signora Rita rahụrụ ụra, mana mgbe nwa oge gasịrị, a manyere ya iteta n'ụra ma chee ebe isi ụtaba siri ike dị n'ụlọ ahụ niile sitere. O biliri wee bidogharia n’ime ulo ulo, n’enweghi mgbali obula ma, nye ndi mechara baara ya mba, na-eche na ya onwe ya gara n’etiti abali, o na-ekwusi ike na odi ya nma, ya na ya ano n’iru na nma. .
“Daysbọchị ole na ole ka nke ahụ gasịrị, agara m nyocha echocardiogram maka ụlọ ọgwụ; n'ezie a ga - arụ ọrụ m na valves nke obi site na prof. Musumeci nke ụlọ ọgwụ San Camillo. Mgbe nyochachara ahụ, ọkà mmụta ihe omimi ahụ nọgidere na-elele nsonaazụ ya na oke ịmata ihe. Ọ kpọrọ onye bụ isi onye jiri ọchị gwa m. "Signo 'oleekwa ebe stenosis gị gara?"
A kpaliri m ma za m, sị: "Na San Giovanni Rotondo, nke Padre Pio, Prọfesọ ...". Ọ baghị uru ikwu na nke a karịrị ntụgharị nke Oriakụ Rita.
← Na post gara aga Gara aga post:Nraranye iji nyere gị aka n'oge nsogbu
Ọzọ Post → Post ozo:Kpee ụbọchị taa na ị ga-ahapụ ka Onyenweanyị kpochapụ ihe ndị na-abụghị nke gị na ndụ gị